महिला तथा बाल स्वास्थ्य | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "महिला तथा बाल स्वास्थ्य" गर्भको बच्चामा आमाबाबुको प्रभाव - स्वास्थ्य खबरपत्रिका / प्रत्येक क्रोमोजम्समा हजारौंको संख्यामा जिन हुन्छन् । जिनहरु एक प्रकारको रसायनबाट बनेका हुन्छन् । जसलाई डी.एन.ए. भनिन्छ । यिनै जिनले नै बालकका गुणहरु निश्चित गर्दछन् । यसबाट नै बालकको पैत्रिक वा वंशानुगत गुण, छालाको रङ्ग, उचाई, कपालको रङ्ग र प्रकार (कालो, खैरो, खस्रो सिधा, घुँघुरिएको), स्वास्थ्य, बृद्धि, व्यक्तित्व आदि निर्धारण [...]
विशेष ध्यान दिऔं बालबालिकालाई डा. बालकृष्ण कालाखेती/ बालरोग विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल / बालबालिकाहरु हरेक मौसममा विभिन्न रोगको जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । हात नधोइ खाने, धुलोमा खेल्ने र जे भेटायो त्यही मुखमा हाल्ने गर्नाले बालबालिकामा रोगको जोखिम बढी हुन्छ । अर्को कुरा बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर हुने भएकाले उनीहरुको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान पु¥याउनुपर्छ । गर्मी महिनामा [...]
महिनावारी बिग्रेमा डिस्मेनोरिया महिनावारी हुँदा धेरैलाई खपिनसक्नु पेट दुख्ने, बान्ता आउने, वाक्वाकी लाग्ने, ढाड र कम्मर दुख्ने, खान मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न बाधा हुने हुन्छ । यस्तो समस्यालाई डिस्मेनोरिया भनिन्छ । यो समस्या विवाहिता र अविवाहिता दुवै महिलामा देखिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा दुखाइ लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ । केही महिलाले दुखाइ सहन नसकेर आफूखुसी [...]
पाठेघरको मुखको क्यान्सर डा अचला वैद्य, बरिष्ठ महिला क्यान्सर रोग बिशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल / नेपालका महिलामा देखिने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर) सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो । यो क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) को संक्रमणले हुन्छ । यो संक्रमणलाई प्री क्यान्सर भनिन्छ । यो भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ । समयमै संक्रमण [...]
‘पिसापसम्बन्धी समस्याबाट पीडित महिलाको संख्या दुई गुना छ’ डा. अर्जुनदेव भट्ट, वरिष्ठ मुत्ररोग विशेषज्ञ / नेपालमा पिसाबसम्बन्धी रोग र समस्या कुन हदसम्म छ ? पिसाबसम्बन्धी रोग संसारका धेरै मानिसलाई हुने रोग हो । संसारका करिब १५ देखि २० प्रतिशत मानिस मुत्ररोगबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि धेरै महिला यस रोगबाट पीडित छन भन्ने अनुमान छ । तर यकिनसाथ [...]
के हो गर्भपतन ? डा.सरस्वती पाध्ये, बरिष्ठ प्रसुतीरोग विशेषज्ञ गर्भपतन भन्नाले नछुने भएको दिनबाट गणना गर्दा २८ हप्ताभन्दा पहिले गर्भमा भएका भू्रण, विकसित भ्रूण अथवा शिशुबाहिर निस्कने प्रक्रियालाई सम्झनुपर्छ । जुनसुकै गर्भावस्थाको दिन गणना गर्दा नछुने भएको पहिलो दिनबाट गणना गरिन्छ । यस दिनबाट २५० दिन वा ४० हप्ता वा ९ महिना ७ दिन पुगेपछि गर्भावस्था पूर्ण हुन्छ । [...]
पाठेघर खस्ने कारणहरु चिकित्साशास्त्रको दृटिकोणले पाठेघर खस्नाको मुख्य कारण पाठेघरलाई अड्याइराख्ने मांसपेशी कमजोर हुँदै जानु हो । प्रजनन अंगसँग सम्बन्धित कारणमध्ये पाठेघरलाई धानेर राख्ने तन्तुहरू लच्किँने, पाठेघरलाई कसेर राखेको भुइँमा संक्रमण हुने आदि हुन् । तर सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पाठेघर खस्ने अन्य थुप्रै कारणहरु छन् । सानो उमेरमा विवाह — शरीरको पूर्णरुपले विकास नहुँदै विवाह [...]
सन्तानहीनता कुनै कुनै स्त्रीहरुले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थालाई बाँझोपन भनिन्छ । यस्ता दम्पती मध्ये धेरैले आफ्नो जीवन एक्लो र फिका अनुभव गर्दछन् । समाजमा सन्तान नहुनेलाई अपुतो भनी हेला गर्ने चलन छ । यस्ता मान्छेहरुको सन्तान नहुनुका कारणहरु पत्ता लगाउन सकेमा बाँझोपनको उपचार हुनसक्छ सक्दैन भन्ने कुरा ठहर गर्न सकिन्छ । [...]
गर्भावस्थामा देखिने समस्या डा. लता बज्राचार्य, बरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ / महिलाको पेटमा गर्भ बसेपछि गर्भको संकेतको रुपमा शुरूको अवस्थामा वाक्वाकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, रिँगटा लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । गर्भावस्था महिलाका लागि संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा तनाव लिने, ठाउँ परिवर्तन गर्ने, गरूङ्गो भारी उठाउने र बढी यौन सम्पर्क गर्नाले पनि तल्लो पेट [...]
बच्चामा देखिने दाँतसम्बन्धी रोगहरु डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ बरिष्ठ दन्त चिकित्सक कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मानिस पूर्ण रुपले स्वस्थ रहन शारिरीक, मानसिक तथा सामाजिक रुपमा स्वस्थ हुनुपर्दछ । शारिरीक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्दा हामीले मुख तथा दन्त स्वास्थ्यलाई नकार्न सक्दैनौं । चिकित्साशास्त्रमा गरिएको अनुसन्धान अनु्सार मानिसलाई हुने शारिरीक समस्याहरुमध्ये मुख तथा दाँत सम्बन्धी समस्याहरु बढी पाइएको [...]